Killashee Hotel dị naanị 30km site na Dublin City na naanị 2km na mpụga obodo Naas. N'ịbụ nke dị n'etiti ime obodo na -achagharị nke County Kildare, Killashee bụ n'ezie ebe pụrụ iche na anyị enweghị ike ichere ịkekọrịta ya na ezinụlọ gị. Site na ịdị ukwuu nke Victoria nke ụlọ izizi, ruo acres nke ubi mara mma na oke ọhịa na ụzọ ọhịa dị ebube, enwere ọtụtụ ebe zoro ezo iji nyocha. Ọnọdụ mara mma n'ezie, yana akụkọ ihe mere eme bara ụba, nke ahụ na -eche ka achọpụtara gị.
Site na ụlọ oriri na ọ ??ụ 141ụ 25 mara mma họpụtara ụlọ ezumike ruo ọrụ afọ ofufo nke Leisure Club na -enye ebe igwu mmiri 18m, sauna, ụlọ uzuoku, Jacuzzi na mgbatị ahụ zuru oke yana kwa ọmarịcha Killashee Spa nwere ụlọ ọgwụgwọ XNUMX dị okomoko, enwere ọtụtụ ihe iji zụọ gị na ọtụtụ ihe ị ga -enweta. Ebe mgbaba dị jụụ, Killashee Spa bụ ezumike zuru oke na ọ bụ ebumnuche Killashee Spa ga-ebute gị na njem ahụike zuru oke maka ahụ, uche & mkpụrụ obi.
Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ụlọ oriri abụọ. Ụlọ oriri na ọraụ Terụ Terrace na -enye ahụmịhe iri nri dị egwu nke na -ele ogige mmiri anya ma na -emeghe kwa ụbọchị na -eje ozi tii ehihie na nri abalị. Bistro & Bar na -enye ahụmịhe iri nri na -adịkarị mma maka nri abalị & mmanya. Ebe a na -echekwa ihe bụ ebe Killashee Coffee Dock maka tii/kọfị gị, scones, achịcha achịcha na ọtịta ọkụ. Nwee ọ coffeeụ kọfị kọfị ma mee ka ị na-agagharị na ala.
Enwere ọtụtụ ọrụ na mpaghara mara mma nke Killashee gụnyere ụzọ ụkwụ ọhịa. Maapụ ala dị na nnabata ma ọ bụ gịnị kpatara na ị gaghị agbazite otu anyịnya igwe anyị nke bara uru maka ndị ọbịa niile. Were mkpagharị mkpagharị gafee n'ọmarịcha Fountain Gardens, Emma's Butterfly Garden na DEBRA Ireland, Teddy Bear Picnic Garden ma ọ bụ Ọhịa Fairy ọhụrụ na ebe egwuregwu anyị. Killashee nwere Johnny Magory - Irish Wildlife & Heritage Trail for Children. Site na mmemme 4 na saịtị metụtara Johnny Magory na ụlọ nkwari akụ ọ na -ahụ na ị nwere nleta ezinụlọ anwansi na Killashee.
Hotels, okomoko, Ezigbo ezinụlọ, Hotlọ nkwari akụ Spa, Mmiri mmiri, Ebe Agbamakwụkwọ, Naas
Okporo ụzọ Kilcullen, Naas, Obodo Kildare, W91 DC98, Ireland.